Chidhindo - Wikipedia
Chidhindo (Chingezi: signature; stamp) kana siginicha chinyorwa chechanza (chinowanzo nakiswa) chinoshandiswa kuratidza zita remunhu, zita remadunhurirwa, kana ibhii senge 'K' kana chimwe chimaro chemunhu iyeye chaano nyora pazvigwaro sehumbowo hweupauro kana chinangwa. Munyori wechidhindo anonzi mudhindi (signatory kana signer muChingezi). Chindindo chinoratidza (kana kuzivisa vamwe) muridzi wechisiko.
Chidhindo cha Stella Morton
Chidhindo cha Alexander Solodukha
Chidhindo chinogona kusanganiswa neotogirafi, iyi inoshandiswa seyeuseza (neVadikani -> celebirites). Izvi zvinogona kukonzeresa kuvhiringidzika kana vanhu vaine zvese otogirafi uye chidhindo uye nekudaro vamwe vanhu vari muziso reruzhinji vanochengeta zvidhindo zvavo vega vachinyatsoburitsa otogirafi yavo.
Mazana emakore apfuura vamwe vanhu vaishandisa yekuisa mucheremo wakisi kugadzira kopi yemachende avo eseti padyo kana pane siginecha. Izvi zvinonzi "chisimbiso chavo" Apa ndipo panobva izwi rekuti "chisimbiso chekubvumidzwa" .Mamwe magwaro akarongeka achiri kushandisa yakisi yakanamirwa, senge jasi rezvombo .
Mhando dze zvidhindoEdit
Chidhindo inonyorova : - siginecha inonyorova, siginecha yeingi, kana siginecha yeingi nyoro ndiko kumakisa kunoitwa nemunhu kusaina zita rake pabepa, kazhinji nepeni.
Masiginecha emvura ndiwo akajairika marudzi emasiginecha uye ave achishandiswa kwemazana emakore sechiratidzo chakasarudzika kuratidza kubvumirana uye kudzivirira kubiridzira. Masiginecha epanyama ave achishandiswa kubvira 3500 BC muchimiro chezvisimbiso, asi maive muma1600s apo masiginecha akanyorwa pabepa akatanga kushandiswa zvakanyanya uye zviri pamutemo.
Kunyangwe masiginecha akanyorova anogona kugadzirwa nevanhu vane hunyanzvi, zvaive zvakajairika kusvika pakutanga kwezana ramakumi maviri nemasere, apo masiginecha epamhepo paakatanga kusungwa zviri pamutemo.
Chidhindo yemagetsi kana E-siginecha: - Zvirongwa zveSoftware zvinobvumidza inomiririra siginicha kuti ishandiswe iyo yakagadzirwa ne software.
Chidhindo yedhijitari : - siginicha yedhijitari siginicha inogadzirwa nemunyori sekutevedzera, kunamatira nekumisikidza kopi yemasaini avo kana siginecha inogadzirwa uchishandisa chinyoreso.
Retrieved from "https://sn.wikipedia.org/w/index.php?title=Chidhindo&oldid=89721"
Last edited on 27 Gunyana 2021, at 09:40
This page was last edited on 27 Gunyana 2021, at 09:40.